अन्तत: झाक्री पनि ओलीको बैठकमा, एक घन्टासम्म किन मास्क खोलिनन? | The Mirror
काठमाडौँ, एक समय यस्तो थियो एमाले नेत्री रामकुमारी झाक्री घन्टौ सम्म आफ्नै पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई निकै तुच्छ र तल्लो स्तरको गालि मात्र गरेर मात्र ठुला ठुला सभामा पुरै समय बिताउथिन। उनको आलोचनाको सैलीको निकै आलोचना पनि भयो। ओली र उनका समूहका नेतामाथि हावी भएकी उनले बारम्बार ओलीको राजनीतिक मात्र होइन, चारित्रक आलोचना पनि गरिन।
एक पटक उनले भनेकी थिइन, ‘आफैंले भंग गरेको संसदमा आउँदा श्री ३ केपी शर्मा ओलीले मास्क लगाएर आउनू, अनुहार नदेखिनेगरी सम्बोधन गर्नु पर्छ’। जब सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेललाई जिम्मा लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि ओली हावी भए। अनि राजनीतिकले अर्को मोड लियो।
एमालेभित्र पनि समानान्तर गतिविधि भइरहेपछि प्रधानमन्त्री निक आक्रामक हुन थाले। फागुन २८ मा उनले बैठक राखी माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए, संसदीय दलको बैठक पनि निरन्तर राखेर फटाफट निर्णय लिन थाले।
अनि सुरु भयो झाक्रीको दुखद समय…
बालुवाटारमा कहिल्यै नटेक्ने भनेर कसम खाएकी झाक्री शुक्रबार भने लुरुलुरु मास्क लगाएरै ओलीको बैठकमा पुगिन र चुपचाप एउटा कुनामा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीका भनाईहरु सुनिरहिन। त्यसबेला झाँक्री निक्कै नै निरिह जस्तो देखिएकी थिइन्। उनको अनुहारको मलिन्द्रता देखिएला भनेर पनि हुन सक्छ उनले आफ्नो मास्क नखोलेकी बसिरहिन। एक सहभागी भन्छन्, ‘झाक्रीले त प्रधानमन्त्रीतिर आँखा जुधाएर हेर्न पनि सकिनन, कसरी समानुपातिक सांसदको जागिर टिकाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेकी होलिन’।
प्रदर्शनीमार्गमा भएको विरोध सभामा सम्बोधन गर्न उत्रिँदा झाँक्रीले मुखमा टेप लगाएकी थिइन् र ज्याकेटमा बोल्न पाइन्छ भन्ने लेखाएकी थिइन्। उनले सम्बोधनको सुरुआत नै बोल्न पाइन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरेकी थिइन्। सोही क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि खुलेर बिरोध गरेकी थिइन् तर बालुवाटार बैठकमा भने उनी चुइँक्क पनि गरिनन्, मास्क पनि खोलिनन।
झाँक्रीका लागि राजनीतिक नभई नैतिक रुपमा यो भन्दा जटिल समय सायद यसअघि कहिल्यै पनि आएको थिएन।झाँक्रीलाई एमालेमा स्पष्टिकरण सोधिने आँकलन पनि गरेका बेला ओलीले भनिदिए, ‘उनी वेट भएकी नेत्री नै हैन, किन सोध्नु’?
फोनमा मस्त मास्क लगाएकी झाक्री
झाँक्रीका सन्दर्भमा भने एमालेवृत्तमा भएको अर्को चर्चा पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा पारेपछि झाँक्रीलाई नै पहिलो कारबाही गर्छन् भन्ने अनुमान लगाइएको छ तर अहिले नै त्यस्तो संकेत मिलेको छैन। हेरौ अब उनको राजनीतिक भबिस्य कसरी अगाडी बढ्छ।